मिचिएको नेपाली भुमि फि’र्ताको माग गर्दै डा. केसीले दार्चुलामा सुरु गरे १८ औँ अ’नशन…भुमी फि’र्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने जतिले सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
प्रकाश चन्द्र भट्ट, दार्चुला : मिचिएको नेपाली भू’मी फि’र्ताको माग राख्दै डा’क्टर गोविन्द केसीले दार्चुलामा दुई दिने स’त्याग्रह सुरु गरेका छन् ।
मंगलवार विहान १० बजे खलंगाको जगन्नाथ म’न्दिर गल्फैमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले भु’मि फि’र्ता लगायतका तीन बुद्धे माग राख्दै स’त्याग्रह सुरु गरेका हुन् । सि’मा क्षे’त्र लगायत सबै नागरिकहरुको समृद्धी, नेपालको सा’र्वभौमसत्ताको रक्षा तथा गु’णस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच लागि आफूले स’त्याग्रह सुरु गरेको उहाले बताए ।
उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलगायतका माग पनि उठाएका छन् । भारतले अ’तिक्रमण गरेको नेपाली भू’मी कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरा क्षे’त्रमा गएर दुई दिने स’त्याग्रह गर्ने घो’षणा गरेका उनले भौ’गोलिक कठि’नाइका का’रण सो क्षे’त्र पुग्न नसकेको बताए ।
वास्तवममै रा’ष्ट्रियता बलियो पार्ने हो र देशको सी’मा र’क्षा गर्ने हो भने काठमाडौंका सड¥कमा नारा लगाएर वा बालुवाटार दरबारबाट हुं¥कार गरेर पुग्दैन,’ डा. केसीले भने ।सी’मा क्षे’त्रका मानिसको पी’डा प्रति रा’ज्यको ध्या’नाकर्षण गराउँदै यहाँको शि’क्षा, स्वा’स्थ्य, यातायात र जी’विकाको उचि’त
व्यवस्था गर्न तथा नेपालको सार्व’भौमसत्ताको र’क्षा गर्दै भारतले मि’चिको नेपाली भु’मि फि’र्ता गर्ने प्र’क्रिया तत्का’ल शुरु गर्न माग गर्दै स’त्याग्रह गर्ने घो’षणा गरेका थिए । डा. केसी दुई महिना डडेल्धुरा अ’स्पतालमा निःशुल्क से’वा गरेर बझाङ, बैतडी हुँदै दार्चुला पुगेका हुन् ।